Kooxda Juventus oo markale dharbaaxo xoogan la damacsan Real Madrid – Gool FM
Kooxda Juventus oo markale dharbaaxo xoogan la damacsan Real Madrid
(Juventus) 19 Okt 2018. Warbaahinta Talyaaniga ayaa waxay shaaca ka qaaday in Juventus ay si weyn uga fikireyso lasoo saxiixashada difaaca garabka bidix ee reer Brazil iyo kooxda Real Madrid Marcelo.
Wargeyska “Tuttosport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu sheegay in kooxda Juventus aysan aamusi doonin kadib marka ay Real Madrid kala soo saxiixatay Cristiano Ronaldo.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Juventus aysan wax dood ah ka qabi doonin iibinta difaaceeda garabka bidix ee Alex Sandro, kadib markii dalabyo badan ay kasoo gudbiyeen qaar ka mid ah kooxaha Premier League xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Magaca Marcelo ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo kooxda Juventus xiliyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan ka dib markii uu Cristiano Ronaldo u dhaqaaqay Bianconeri bartamihii bishii July ee lasoo dhaafay.
Cristiano Ronaldo ayaa qof kasta kaga yaabsaday go’aankii uu kaga dhaqaaqay Real Madrid kadib mudo 9 sano uu kusoo sugnaa garoonka Santiago Bernabue, isla markaana uu la soo gaaray guulo waaweyn ee isugu jira mid guud iyo mid shaqsiyadeed, balse ugu dambeyn wuxuu go’aansaday inuu tijaabiyo loolan cusub ee ah kooxda Juventus.
Gianluigi Buffon oo u sharaxay Kylian Mbappé inuu ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d'Or
David de Gea oo iska diiday inuu raaco wadada saaxiibkiis kooxda Manchester United ee Luke Shaw